Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Enyere ndụmọdụ gbasara ugwu mgbawa na Hawai'i
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Kamaainas • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ihe karịrị ala ọma jijiji 140 dara na Big Island nke Hawaii kemgbe mgbede ụnyaahụ, Mọnde, Ọgọst 23, 2021. Ọtụtụ n'ime ha nọ n'okpuru ịdị ukwuu 1 na otu na 3.3
Obere ala ọma jijiji na ala ọma jijiji a na -aga n'ihu n'ihe ruru ala ọma jijiji 10 kwa elekere, nke zuru oke kpatara inye ndụmọdụ.
Hawai'i Volcano Observatory na -emechi inyocha ihe a na -eme na ndagwurugwu Kilauea ebe ala ọma jijiji na -eme.
Hawai'i Volcano Observatory ga -enye mmelite kwa ụbọchị ruo mgbe amara ọzọ.
Ndị nlegharị anya ugwu ugwu Hawai'i na Ogige National Volcanoes nke Hawai'i na -ekiri ihe a na -eme ma jiri nlezianya na -adụ ọdụ na ndagwurugwu Kilauea adịghị agbawa. HVO na -aga n'ihu na -eleru anya ala ọma jijiji nke Kilauea, nrụrụ, na ikuku gas maka mgbanwe ọ bụla na ọrụ.
Dị ka edere ede a, enweghị ihe akaebe ọ bụla nke lava dị na ndagwurugwu Kilauea, agbanyeghị, enwere mgbanwe nrụrụ ala na tiltmeters na mpaghara elu ugwu Kilauea. Nke a nwere ike igosi na magma na -ebe 0.6 ruo 1.2 kilomita n'okpuru caldera wee na -aga n'akụkụ ndịda nke ndagwurugwu ahụ.
Iwe nke Pele - Chi nwanyị nke ugwu mgbawa
Onye ọ bụla sitere na Hawaii ga -agwa gị na ọrụ mgbawa ugwu na agwaetiti ndị a bụ ozi sitere na Pele, chi dị na akụkọ ifo Hawaiian. Ọ bụ chi nwanyị ọkụ, àmụ̀mà, ifufe, ịgba egwu, na ugwu mgbawa.
Pele nwere agwa dị oke egwu na nke a na -ejighị n'aka nke a na -eji oke iwe eme ihe, na -eme ka a mara iwe ya n'ụdị mgbawa ugwu. O kpochapula obodo na oke ohia ka lava na -esi n'ugwu na -asọba n'oké osimiri.
Akụkọ mgbe ochie nwere na ọ na -adị ndụ na ndagwurugwu Halemaumau na nzuko nke Kilauea, otu n'ime ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ n'ụwa.
A na -egosipụtakarị Pele dị ka onye na -awagharị awagharị na ịhụ ya ka a kọọrọ n'agwaetiti ahụ ruo ọtụtụ narị afọ, mana ọkachasị n'akụkụ oke ugwu mgbawa na nso ụlọ Kilauea. Na nlele ndị a, ọ na -egosi dị ka nwa agbọghọ mara mma nke ukwuu ma ọ bụ agadi nwanyị na -adịghị mma ma na -esighi ike nke nkịta ọcha na -esokarị. Akụkọ mgbe ochie na -ekwu na Pele na -ewere ụdị nwanyị agadi a na -arịọ arịrịọ iji nwalee ndị mmadụ - na -ajụ ha ma ha nwere nri ma ọ bụ ihe ọ toụ drinkụ ịkekọrịta. Ndị na -emesapụ aka ma na -ekerịta ya na -akwụghachi ụgwọ, ebe onye ọ bụla nwere anyaukwu ma ọ bụ onye na -enweghị obi ebere na -ata ya ahụhụ n'ụlọ ya ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa.
Ndị ọbịa na Hawai'i ga -anụ na Pele ga -akọcha onye ọ bụla wepụrụ okwute mmiri n'ụlọ agwaetiti ya. Ruo taa, a na -ezigara puku kwuru puku iberibe nkume lava na Hawai'i site n'aka ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na -ekwusi ike na ha enwela ọchichị na ọdachi n'ihi iwere okwute lava laa.
Hawai'i Volcano Observatory ga -ewepụta mmelite Kilauea kwa ụbọchị ruo mgbe amara ọzọ.